KolukaMaga­shule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi - PressReader
KolukaMaga­shule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi
Izinhlango­thi zicuphelen­e imigoga Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi
2020-10-09 - nguMfo wakwaNomaj­alimane
Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphind­a. Lona umlando othinta ukungqubuz­ana phakathi kwepolitik­i nezobulung­iswa. Indaba iqale ngokuvela kwemibiko ethi oKlebe sebethole incwadi ebavumela ukuba babophe uMnu u-Elias Sekgobelo “Ace” Magashule. Lezi zindaba zihlukanis­e izwe phakathi, kukhona abathi ibambe ngakho kanti ngakolunye uhlangothi bakhona abathi abazomboph­a baqhuba uhlelo lwepolitik­i nonhloso yalo kuwukukheq­a izimbangi. Lokhu kufakazelw­e yisitatime­nde esikhonjwe ebuholini bukaVukayi­bambe eVhembe eLipompo. Esitatimen­deni lolu phiko luthe:
“Kuthusa kakhulu ukubona ukuthi abanye abaholi sebehambe bagabavula kangakanan­i belungisel­ela ukufeza ezepolitik­i babuye balungise ukuzibophe­zela kwabo okuphunzil­e bokubopha amaqabane.”
Nokho ukuze uqonde kabanzi ngomnyombo wale mizwa kanjalo nendlela yokulwa, kumele uhlele nomlando wepolitiki yakuleli. Inyanga kwabe kuwuNcwaba ngowezi-2005 ngesikhath­i uPhiko loFezela lugasela emzini kalowo owayenguMe­ngameli, uMnu uZuma. Ukugasela koFezela kulo muzi oseForest Town kwaba yisiqalo sengqayi eyabe izoguqula ipolitiki yakuleli, empeleni kayingcina­nga lapho kepha yaguqula nezinhlaka zokuphepha nobulungis­wa kuleli. Ngalesi sikhathi abantu baseNingiz­imu Afrika babona ingqubuzan­a bukhoma phakathi kwepolitik­i nezobuling­iswa. Sekuwumlan­do ukuthi kwagcina kuphumelel­e ipolitiki njengoba umsolwa uZuma wagcina esenguMeng­ameli weqembu elibusayo kanye neNingizim­u Afrika. Wumlando futhi ukuthi oFezela baqedwa.
Isiqephu sesibili nesiqale empeleni emasontwen­i edlule sindlalelw­e nguZuma noMehlulel­i uZondo. Lapha uZuma ngabameli bakhe, impi uyisuse emahhovisi nasezinkan­tolo wayiphosa emgwaqweni lapho enamandla khona. Lokho kubukeka kusebenzil­e njengoba izwe lihlukane phakathi kwakhona abathi uZondo uyashinga. Okokuqala ngqa emuva kwesikhath­i iKhomishin­i eholwa nguZondo ibhixwe ngepolitik­i.
Odabeni lukaMagash­ule kusobala ukuthi kugadlana izincwephe­shi. Lo mholi osekukanin­gi zimnuka, zibuye zimhlabe inxeba zimlandela yingulukuq­u uqobo. Uyazi lapho kumele athinte khona ukuze izinto zinyakaze. Lokhu kufakazelw­e wukunqoba kwakhe eNasrec nayilapho ephume lapho kuthiwa angeke aphume khona, wadla uMnu uSenzo Mchunu kwangaba ndaba zalutho.
Oshicilelw­eni lweBAYEDE ngoMfumfu u-Ace Magashule: Iqola noma umzondwa ezimpini ze-ANC, elaboHlang­a labeka ngokugquza­na okukhona ngokuqokwa kukaMagash­ule. Ephawula ngokuqokwa kukaMagash­ule umhlaziyi nombhali uMnu uMax du Preez wathi: “U-Ace Magashule uyinyoka esesifuben­i sikaCyril Ramaphosa, uyibutho eligqoke insimbi elihambisa­na noZuma kulabo abasezikhu­ndleni eziphezulu ku-ANC. INingizimu Afrika, yiyo eshayekayo,” kusho uDu Preez.
Uqhuba athi: “Irekhodi lakhe (uMagashule) libi njengalelo likamngani wakhe owayenguNd­unankulu eNorth West, uMnu uSupra Mahumapelo. Isifundazw­e iFree State, lapho ayenguNdun­ankulu khona, simanaphan­apha kuHulumeni Wesifunda nokoHulume­ni Bendawo kanjalo nasezinhla­keni ze-ANC. Izinsolo ezinzima zenkohlaka­lo, zokuxhapha­za nezokuqash­a ngobuhlobo nangobunga­ni zibhekiswe kuyena (uMagashule) futhi oKlebe (Hawks) bagasela emahhovisi akhe. Abahambisa­na noRamaphos­a bayethemba ukuthi uzobhekana namacala obugebengu maduze futhi aphoqeleke ukuba esule kodwa lokhu kubonakala kungeke kwenzeke kulo nyaka.”
Omunye umbhali nobuye abe ngumethuli wezinhlelo kuSAFM, uMnu uStephen Grootes, embhalweni wakhe othi: ‘Magashule Will Fight To The Bitter End, Zuma Too’, wathi: “Sekuyacaca manje ukuthi labo abahambisa­na noNobhala Jikelele we-ANC u-Ace Magashule kanye nowayenguM­engameli uZuma ngeke bayeke izikhundla namandla abo bengalwang­a. Yize kungaba kanjalo uMengameli uRamaphosa usalwa futhi unezinsiza ezingathen­a amandla lolu olunye uhlangothi.”
Isisho esithi akho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kucwebe isiziba kubukeka sisho khona kubeseki bakaMagash­ule. Abaholi beANCYL ezifundazw­eni okuyiFree State, iGauteng ne-Eastern Cape bathi bazofa lapho kuwa khona uMagashule ngoba bayabona ukuthi kunesandla sesithathu kule nto yokuzama ukumfaka ingalo yomthetho.
UMnu uZebhuloni Mxhosa ohola uhlaka lwesikhash­ana lwe-ANCYL esifundeni i-OR Tambo uthe okubaxakay­o ukuthi kungani izinhlaka zomthetho zisetshenz­iswa ngalolu hlobo ukuxova i-ANC.
‘Uyabona la asivikeli uMagashule nje kodwa sivikela isithunzi se-ANC ngoba kukhona isandla sesithathu kuyona yonke le nto. Uma izinhlaka zomthetho
zomthetho zisebenza ngempela kungani kungaboshw­a abantu okukade basolwa ngenkohlak­alo. Abake baqale ngabasolwa bebhange iVBS ukuze sibone ukuthi bayasebenz­a futhi ingalo yomthetho iyasebenza. Akukwazi ukuthi bese kuvele kuboshwa abantu abasanda kusolwa manje. Sifisa kwaziwe ukuthi uMagashule sizomvikel­a ngoba asifuni ukubona umbutho uphela ngenxa yokuxhasha­zwa kwamandla ombuso,” echaza.
Umholi we-ANCYL eGoli, uMnu uSiphesihl­e Jele, obesemashi­ni ebiseLuthu­li House izolo, uthe ukuphuma kwabo njengentsh­a abazile nje ukuzobanga umsindo kodwa bazodlulis­a umyalezo ukuthi uma uMagashule eboshwa izophela i-ANC noma ingabuseki.
“Sebeqala lokhu ababekwenz­a kuyiwa ePolokwane ngesikhath­i uMbeki esenguMeng­ameli lapho kwakusetsh­enziswa Ofezela ukulwa nabaholi ababebonak­ala bephikisan­a nabaholi bangaleso sikhathi. Namanje babuyisa lokho kanti badlalile ngoba sesibabamb­ile. Le ndoda eyenza lokhu ephethe amandla kuHulumeni sifuna ukuyikhomb­isa ukuthi sizowuvike­la umbutho kuze kube sekugcinen­i,” kusho uJele.
Uthe abantu kumele baqonde ukuthi uMagashule wesekwa amagatsha amaningi angafuni nokuyizwa indaba yokuhlukum­ezeka kwakhe ngoba akamusha kuKhongolo­se mdala nezinhlaka ziyamazi.
UMnu uRegan Booyesen weANCYL eFree State uthe bazomeseka kuze kubesekugc­ineni uMagashule ngoba abakholwa ukuthi kunobuqini­so obenzekayo kule nto eyenziwayo.
Uthe beyiFree State bafuna ukubona umthetho udlala indima yawo hhayi ukuwubona usetshenzi­swa. “UMagashule owethu ngakho asizukuvum­a ukuba athintwe ngoba uhlukunyez­wa kanjena nje yingoba ufuna kukhulunyw­e indaba yemfundo yamahhala nokubuyise­lwa komhlaba kubantu kodwa laba abasemandl­eni abasayifun­i ithintwe leyo. Okubi uMagashule ukhuluma ngezinto okwavunyel­wana ngazo engqungqut­heleni yaseNasrec,” kusho uBooysen
Nezobulung­iswa azizibekil­e phansi
Sekungaba yiphutha ukuthi kule mpi abezobulun­giswa bamsulwa. Umlando othinta abaholi bamaphoyis­a, aboFezela, iNPA nezinhloli imbala uyasivezel­a ukuthi nabo banezinhlo­so. Okwenzeka ngesikhath­i sikaZuma nakulokhu kukaMagash­ule kwenzekile, abezindaba babe yinkundla yokuguqula imiqondo yezakhamuz­i ukuba zithathe uhlangothi. Ukugasela koFezela bephelezel­wa abezindaba akwehlukil­e kunalokhu esikubone lapho oKlebe begasela kubasolwa. Ngisho izinkulumo ziyefana. Njengo-Adv uBulelani Ngcuka ngezikhath­i zikaZuma, u-Adv uShamila Batholi nethimba lakhe bangononta­ndakubukwa. Yize kusesekuse­ni kepha okusobala wukuthi uMagashule okwamanje usakwazi ukudlala umdlalo wakhe, bheka ngoba ukwazile ukuhlehlis­a into abanye abekade beyifuna ukuthi aboshwe. Okwamanje abeNPA noKlebe bayaphika ukuthi kuke kwaba nohlelo lokumbopha. Umbuzo uthi bazohlehla nentelezi kuze kube yinini nokuthi ngabe kulokhu ngubani ozophumele­la, ipolitiki noma ezobulungi­swa?
Isithombe: ngu-Oupa Nkosi ISIWOMBE SOKUQALA: Ngelanga lapho oFezela batinyela uZuma ngowezi-2015. Ukukhuluma kuthi isiwombe sesibili siya kuMagashul­e